1. Emechiela usoro mmịpụta na bọtịnụ PUSH iji belata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa.
2.Igha 360Celsiusnkwụnye swivel na-enye nkasi obi kachasị mma na mgbanwe maka ndị ọrụ ndidi na ndị nọọsụ.
3. gbọ mmiri nke mmiri nwere otu ụzọ valvụ na-enye ohere maka saline nkịtị iji sachaa catheter nke ọma.
4.MDI n'ọdụ ụgbọ mmiri maka irè karị, ngwa ngwa na-adaba adaba nnyefe ọgwụ.
5.Ọ na-egosi maka 24-72 awa na-aga n'ihu were.
6.Dịdee akwụkwọ na ụbọchị akwụkwọ mmado.
7.Serile, onye poel akpa.
8.Soft ma ike catheter uwe.
1. Yankauer mmiri catheter a na-ejikarị ya na njikọ njikọta mmiri, ọ na-ezubere maka ịmịpụta mmiri mmiri na njikọta na aspirator n'oge ọrụ na oghere thoracic ma ọ bụ oghere afọ.
2. Yankauer Aka na-mere nke uzo ihe ka mma visual.
3. Mgbidi mgbidi tube na-enye ike dị elu na mgbochi kinking.
Oxygen Mask bu nke nkpuchi aerosol na tubing oxygen na-ekpuchi onu na imi ma tinye ya na tankị oxygen.Oji oxygen na-ebufe ikuku oxygen na-eku ume na ngụgụ ndị ọrịa. Igwe ikuku oxygen na-egosipụta eriri na-agbanwe agbanwe na obere imi imi nke nwere ike ime ka ọ dabara nke ọma n'ọtụtụ nha ihu. Oxygen Mask na tubing na-abịa na 200cm oxygen ọkọnọ tubing, na doro anya na juu vinyl na-enye akwa ndidi nkasi obi na-enye ohere visual ntule. Oxygen Mask na tubing dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ uzo.
1. Maka otu eji naanị, A machibidoro iji ya ọzọ.
2.Sterilized site ethylene oxide anaghị eji ma ọ bụrụ na mbukota mebiri ma ọ bụ na-emeghe.
3.Store n'okpuru shady, dị jụụ, ọkọchị, ventilated na ọnọdụ dị ọcha.